War Rasmi Ah: Eden Hazard Uu Sii Joogi Doono Kooxda Real Madrid Xagaagan
HomeWararka CiyaarahaWar Rasmi ah: Eden Hazard uu sii joogi Doono kooxda Real Madrid xagaagan
May 14, 2022 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga 0
Tababaraha kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa xaqiijiyay in Eden Hazard uu kooxda sii joogi doono wixii ka dambeeya dhamaadka suuqa kala iibsiga xagaagan.
Laacibka heerka caalami ee dalka Belgium ayaa mar kale ku adkeyd inuu u sameeyo Los Blancos xilli ciyaareedka 2021-22, isagoo la kulmay dhibaatooyin dhaawacyo ah.
Hazard ayaa dhaliyay kaliya hal gool, waxaana uu caawiyay labo gool 22 kulan oo uu u saftay Real Madrid xilli ciyaareedkan, halka uu garoomada ka maqnaa tan iyo bishii March, isagoo maray qaliin looga soo saaray saxanka osteosynthesis oo ku yaal fibula midig.
31-sano jirkaan ayaa ku soo laabtay tababarka kooxda koowaad, inkastoo, waxaana la filayaa inuu u ciyaaro kooxda heysata horyaalka La Liga ka hor dhamaadka ololaha.
Hazard ayaa wax ka yar labo sano uga harsan tahay qandaraaskiisa Bernabeu, waxaana jiray soo jeedinno ku aadan inuu u dhaqaaqi karo suuqa soo socda, iyadoo kooxo dhowr ah ay si dhow isha ugu hayaan horumarka ku xeeran da’yarkii hore ee Lille.
Si kastaba ha ahaatee, Ancelotti, oo ka hadlayay ka hor kulanka Axada ee La Liga ee Cadiz, ayaa xaqiijiyay in Belgian-ka uu sii joogi doono kooxda xagaagan.
“Qorshihiisa aad ayuu u cad yahay: waa uu sii joogayaa, wuxuuna sidaas ku sameynayaa dhiirogelin badan sababtoo ah waqti adag ayuu soo maray sanadihii ugu dambeeyay, wuxuu doonayaa inuu muujiyo tayadiisa,” Ancelotti ayaa u sheegay suxufiyiinta.
Dhanka kale, mar la weydiiyay hadii Hazard uu heli doono fursad uu ku helo daqiiqadaha caadiga ah ee xilli ciyaareedka soo socda, tababaraha reer Talyaani wuxuu ku adkeystay in “qof walba uu heli karo fursadiisa”.
“Waxaan qabaa sidaas, waxaa jira kulamo badan, waxaa jira daal, waxaa jiri doona wareegyo xitaa haddii xilli ciyaareedkan aysan jirin kuwa badan, qof walba wuxuu heli karaa fursadiisa,” ayuu hadalkiisa raaciyay maamulaha Los Blancos.
“Meesha laga bilaabo koox weyn waa ay ku adag tahay qof walba, ma ahan kaliya ciyaartoyda ciyaaraya ka yar, waxaan sii wadaa fikradda ah in tirada daqiiqadaha aysan muhiim u ahayn tayada, sanadkan waxaan haysanaa tusaale cad oo Rodrygo ah. , kaas oo aan ciyaarin daqiiqado badan laakiin waxa uu ciyaaray daqiiqado tayo leh isla markaana sameeyay farqiga”.
Hazard ayaa u dhaqaaqay Real Madrid bishii Luulyo 2019 isagoo dhabarka ka soo qaatay guulo waa weyn oo uu ku qaatay Chelsea, halkaasoo uu u dhaliyay 110 gool isla markaana loo diiwaangeliyay 92 caawin 352 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Isku soo wada duuboo, weeraryahanku wuxuu matalay Los Blancos 65 jeer, isagoo ka qayb qaatay lix gool iyo 10 caawin, waxaana laga yaabaa inuu ololahan ku soo afjaro laba koob, iyadoo kooxdu ay doonayso inay ku soo kordhiso hanashada horyaalka Champions League. ayaa la sugay dhammaadka Abriil.
Hazard ayaa lagu eedeeyay in uu ka caga jiidayo in uu koox u badalo hal sano oo koobka adduunka ah waxana uu wali ku kalsoon yahay in uu waayihiisa ciyaareed guul ku soo kordhin karo kooxda Real Madrid inkasta oo uu ilaa haatan ku dhibtoonayo.
Los Blancos ayaa ka soo kabsatay guuldaradii Madrid derby ee ka soo gaartay Atletico Madrid isbuucii hore iyagoo lix gool ka dhaliyay Levante khamiisti, taasoo ka dhigtay inay heerka labaad u dhacdo kooxda fadhigeedu yahay Valencia.
Kooxda Ancelotti ayaa haatan la ciyaari doonta labadii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka ee ay la ciyaari doonto Cadiz iyo Real Betis ka hor inta ayna dhamaadka May la ciyaarin Liverpool finalka champions League.